【Youjia·Juanguan】Iziko leSixeko丨Kufuphi neSibhedlele saBantu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu碧英
▏Iimbalasane zeNdlu ▏
[Iimpawu zodidi lweyunithi] igumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlambela eli-1, igumbi lokuhlala eli-1, ibhalkhoni enye, indawo yokuhlala eqhelekileyo yabantu aba-2, akukho bantu bongezelelweyo;
[Igumbi lokuhlala eliqaqambileyo] Liqaqambile kwaye licace, linezixhobo ezipheleleyo zekhaya ezifana ne-Wi-Fi, iTV, i-air conditioner, ifriji, umatshini wokuhlamba;
[Igumbi lokulala elitofotofo] I-1.8x2m ibhedi enkulu ethambileyo yibhedi eyenziwe ngokwesiko eyenziwe ngomqhaphu, ekuvumela ukuba ukonwabele ukulala okusemgangathweni;
[Igumbi lokuhlambela elahlukileyo] Izixhobo zeshawari, ishampu, ijeli yeshawa, isomisi seenwele, indawo yokomisa igqityiwe, unikezelo lwamanzi ashushu ngemozulu yonke;
[Ukucoca ngobuchwephesha]Ukucoca okuchubekileyo kunye nokucoca kuya kwenza ukuhlala kwakho kube lula!
[Inkonzo esondeleyo] Umgcini-ndlu okhathalayo uya kukubonelela ngezikhokelo zokungena kwi-intanethi kwaye akunike amava okungena kakhulu!
Indlu ikulungele ukuhamba kunye nokuhamba! Igumbi libanzi kwaye liqaqambile, kwaye ifanitshala entsha yohlobo lwaseYurophu kunye nokuhombisa inika undwendwe lonke ithuba lokuhlala elitofotofo, kwaye likhuphe umoya kunye nencasa yeendwendwe! Okubaluleke ngakumbi, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela zilula kwaye zicocekile, ukuze zonke iindwendwe zikwazi ukuzisebenzisa ngokukhululekileyo kwaye ziqiniseke! Gqibezela izixhobo zasekhaya! Undwendwe ngalunye luyacocwa, kwaye indawo yokulala itshintshwa lundwendwe ngalunye ukuqinisekisa ucoceko nokhuseleko! Ngamafutshane, ukuba zonke iindwendwe zenze uhambo oluhle kunye nokufudumala kwekhaya!
Indlu ibekwe eWanda Plaza, kwaye iindawo ezijikelezileyo zigqityiwe! Zininzi iivenkile ezithengisayo ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zeendwendwe! Isithili samashishini saseWanda siyindawo enye yokutya, ukusela kunye nokuzonwabisa, enezothutho ezilula kunye nokuthenga okulula.Kukho iivenkile ezinkulu, iivenkile ezinkulu, ukutya okumnandi kunye nemiboniso bhanyabhanya. Ikumgama oziimitha ezingama-500 ukusuka kurhulumente wesixeko, kwaye yindawo elungileyo yeshishini lakho, ukuphumla, ukuzonwabisa kunye nokutya. I-4km kude neziko lothutho lwabakhweli, elilungele kakhulu uhambo lwezoshishino.
Isitayile sokuhombisa esitofotofo nesifudumeleyo sanamhlanje siyakwamkela ukuba uhlale ~, kukulungele ukubona ugqirha kwaye unakekele usapho lwakho. Ukuba unayo eminye imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukudibana nam. Ndiza kukubonelela ngokuhamba ngakumbi iingcebiso kunye zama ukuhlangabezana neemfuno zakho ngexesha lokuhlala yakho. Ziyang liyakwamkela!
Umbuki zindwendwe ngu- 碧英
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ziyang